एकादशी: संक्षिप्त जानकारी - नेपाली पात्रो
नेपाली पात्रो > चाडपर्व > एकादशी: संक्षिप्त जानकारी
हिन्दु चन्द्र क्यालेन्डरको एघारौँ मिति (तिथि) लाई एकादशी भनिन्छ। यो तिथि कृष्ण पक्षमा र शुक्ल पक्षमा गरी प्रत्येक महिनामा दुई पटक पर्दछ। पूर्णिमा पछि आउने एकादशीलाई कृष्ण पक्षको एकादशी र अमावस्या (औँसी) पछि आउने एकादशीलाई शुक्ल पक्षको एकादशी भनिन्छ। यस जानकारी मूलक लेखमा एकादशीको ’boutमा जानकारी प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौ।
यी दुई प्रकारका एकादशीहरू नेपाल र भारत तथा सनातन धर्म (हिन्दु) समुदाय बस्ने सबै स्थानहरूमा धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। यो दिन भगवान् विष्णु र उनका विभिन्न फरक नामहरूमा समर्पित रहेको छ। हरेक महिनाको फरक विष्णुका नामहरूमा राम, मधुसूदन, त्रि-विक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषि केश, दामोदर, केशव, नारायण, माधव, गोविन्द आदि प्रमुख नामहरू रहेका छन्। त्यसै गरी, अदिकमास परेको वर्ष को एकादशीको प्रमुख देव भगवान् पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। वास्तवमा यी सबै नामहरू भगवान् विष्णु अर्थात् नारायणको विभिन्न नामहरू नै हुन् त्यसैले धार्मिक भजनहरूमा यी नामहरू लाई “विष्णु सहस्र नाम” भनी सम्बोधन पनि गरिन्छ।
एकादशीको व्रत दशमी तिथि वा दसौँ चन्द्र दिवस को दशमी तिथिले कुनै पनि प्रकारको प्रभावले नछोएको अवस्थामा मानिन्छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा, यदि दसौँ दिन वा दशमीको दिन सूर्योदय हुनुभन्दा ९६ मिनेट अगावै पूरा हुन्छ भने त्यो दिन एकादशीको रूपमा मनाइन्छ। तर, एकादशीको दिन, दशमी तिथि पर्छ वा सूर्योदय हुनुभन्दा ९६ मिनेट पूर्व सम्म दशमी तिथि नसिद्धिएको र अपूर्ण नै छ भने त्यो दिन दशमी तिथि रहन्छ, र त्यस दिनको एकादशी उपवास आउँदो दिनमा बस्नु पर्ने हुन्छ।
एकादशीको कुल संख्या
हिन्दु चन्द्र वर्ष वा क्यालेन्डरमा जम्माजम्मी २४ एकादशी रहेका हुन्छन्। अधिक मास परेको वर्ष भने एकादशीहरूको संख्या २६ हुन जान्छ। त्यस कारण, सामान्यतया प्रत्येक महिनामा दुई एकादशी हुन्छन्। प्रत्येक एकादशीमा भाकल गर्ने र व्रत बस्ने व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न प्रकारका विशेष फाइदाहरू हुने दाबी गरिएको पाइन्छ।
यस दिन उच्चारण गरिने साधारण प्रार्थनाहरू
हिन्दुहरूले यस दिन भगवान् विष्णु र उनका विभिन्न नामहरू प्रार्थना गर्दै व्रत बस्ने गर्दछन्। यस दिनमा प्रार्थना गरिने केही साधारण प्रार्थनाहरूमा: “हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे” वा “ओम नमो भगवते बासुदेवाय” रहेका छन्। यी प्रार्थनाहरू भजनको रूपमा सबै एकादशीको उपवास को क्रममा १०८ पटक जप्ने गरिन्छ।
एकादशी व्रतको फाइदाहरू
पुरानो वैदिक मान्यता अनुसार एकादशीको उपवास/व्रत बसेको खण्डमा सबै प्रकारको हानिकारक ग्रह-प्रभाव हरूबाट छुटकारा पाउन का साथ साथै यस मानव जीवनमा आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ। एकादशी उपवासको दिन ईश्वर (भगवान्) को ’boutमा सोच्न को साथसाथै मोक्ष वा शान्ति प्राप्त गर्नका लागि एक उत्तम दिन मानिन्छ।
एकादशी तिथिमा जब कुनै व्यक्तिले व्रत, पूजा, र सेवा, गरी ब्रह्माण्डका प्रभु श्री हरिको नाममा ध्यान दिएर विभिन्न गतिविधिहरू गर्दछ तब श्री हरि मानव दिमागमा बास गर्नुहुन्छ। यसरी श्रद्धा र आध्यात्मिक कार्य गरेर मानव मस्तिष्कले एक विशेष प्रकारको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त गर्ने गर्दछ। यस प्रकारको आध्यात्मिक ऊर्जा भगवान् श्री हरि, वा नारायणको अनुग्रहले मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ।
भगवानको अनुग्रह प्राप्त गर्नका लागि विशेष अभ्यासको आवश्यकता हुन्छ। यो त्यति सजिलै प्राप्त गर्न सकिने चीज होइन। एकादशी व्रतको उचित तरिकाले अभ्यास गर्ने व्यक्ति सधैँ स्वस्थ, दीर्घायु, र विवेकी रहन्छ। उक्त व्यक्तिले दिमागमा अन्तर्निहित उक्त बुद्धि र विवेकद्वारा भविष्यमा आउने सबै प्रकारका अवरोधहरू हटाउन सक्नेछ। यस कारण, उसको परिवार खुसी रहन्छ। र धर्मशास्त्रमा यो पनि भनिएको छ कि उक्त व्यक्ति देहान्त पछि स्वर्गमा बस्नेछ।
तलको तालिकामा एक वर्षमा पर्ने सबै एकादशीहरू समावेश गरिएको छ।
महिना कृष्ण पक्ष एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी
बैसाख बरुथिनी एकादशी मोहिनी एकादशी
ज्येष्ठ अपरा एकादशी निर्जला एकादशी
असार योगिनी एकादशी हरिशयनी एकादशी
श्रावण कामिका एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी
भाद्र अजा एकादशी हरि परिवर्तिनी एकादशी
असोज इन्दिरा एकादशी पापाङ्कुशा एकादशी
कार्तिक रमा एकादशी हरिबोधिनी एकादशी
मंसिर उत्पत्तिका एकादशी मोक्षदा एकादशी
पौष सफला एकादशी पुत्रदा एकादशी
माघ सट्तिला एकादशी भीमा एकादशी
फागुन विजया एकादशी आमलकी एकादशी
चैत्र पाप मोचनी एकादशी कामदा एकादशी
अधिक मास वा पुरुषोत्तम महिना परेको वर्ष मा कृष्ण पक्षको “पद्मिनी एकादशी” र शुक्ल पक्षको “परमा एकादशी” पर्छ भने भगवान श्री बिष्णुको पुरुषोत्तम नामको पूजा आजा हुन्छ।
सबै पुरुष तथा महिलाहरूले एकादशीमा उपवास बस्ने गर्नु पर्छ। कुनै व्यक्ति पानी बिना उपवास गर्न सक्षम छैन भने फलफूल खाएर वा दिनको एक पटक गाईको दूध पिएर एकादशीको दिनमा उपवास बस्नु पर्छ। उपवासको पालना गर्दै, रातमा जागाराम बसेर भगवान श्री हरि (नारायण) को कथा सुन्ने र सुनाउने गर्नु पर्दछ। जब कसैले एकादशीको रात यसरी जागाराम रही श्री हरि को नाम सुनी बिताउँछ, उसले हजारौँ वर्ष तपस्या गरेको भन्दा धेरै राम्रो फल पाउने छ।
अति उत्तम रूपमा एकादशीको अनुष्ठान गर्नको निमित्त उक्त दिनको भोलि पल्ट अर्थात् द्वादशी को दिन ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने, तथा उनीहरूलाई भिक्षा दान गर्नु पर्छ। यसरी एकादशीलाई विधिवत् तरिकाले अवलोकन गरिएको खण्डमा, सबै पापहरू नष्ट हुन्छन् र ठुलो सद्गुण प्राप्त हुन्छ भनी धर्म ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ।
एकादशीको व्रतमा अन्न खान नहुने विश्वास गरिन्छ। यस दिन सबै पापहरू अन्नमा संकलित भएर बसेका हुन्छन् भनिएको छ। उपवासको समयमा मुख्य रूपमा शारीरिक अवस्थाको पनि विचार गर्नुपर्छ। तसर्थ, साँझको समयमा हविश्यान्नसहित सात्त्विक फलाहारलाई समेत एकादशीमा निषेध मानिएको छ।
व्रतीले दशमी तिथिको दिनदेखि नै शुद्ध एवं सात्त्विक भोजन गर्नु पर्दछ। घर मुलीले पूर्ण रूपमा ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्दछ। यस दिन शुद्ध र सात्त्विक आचरणमा जीवन बिताएर, खुसी रहँदै लोभ अनि ईर्ष्या आदीको त्याग गर्नु पर्छ। मस्तिष्कमा समेत पनि क्रोध, लोभ, नशा, ईर्ष्या, आदिको विचार पनि गर्नु हुँदैन।
व्रतीले मस्तिष्कमा भगवान लाई याद गरिरहनुपर्दछ र निःस्वार्थ रूपमा उनैको सेवा गरिरहनु पर्दछ। यस दिन मासु, प्याज, दाल, इत्यादि खानु हुँदैन। यस रात पूर्ण ब्रह्मचर्यको अवलोकन गर्दै विलासिताबाट पनि टाढा बस्नु पर्दछ।
एकादशीको दिन बिहान दाँत सफा गर्नु वा बिहान दतिउन लगाउनुको सट्टा निम, कागती वा आँपको पात चपाई दाँत मुख सफा गर्ने सल्लाह दिइएको छ। दाँत र घाँटी सफा गर्नका लागि औँलाहरू प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ, भने रूखबाट पात टिप्न पनि निषेध गरिएको छ। त्यस कारण, झरेका पातहरू नै सफा गर्ने कार्यको लागि प्रयोग गरिनु पर्दछ। यदि यो सम्भव नभएको खण्डमा भने, बाह्र पटक पानीले मुख कुल्ला गर्नु पर्छ। त्यसपछि नुहाउनु पर्छ र मन्दिर जानु पर्छ अनि गीता पाठ गर्ने वा पुजारीसँग गीता पाठ सुन्नु पर्छ। प्रभुको अगाडि: “आज म चोर, कपटीहरू र दुष्ट मानिसहरूसँग कुरा गर्ने छैन, न त मैले कसैको हृदय दुखाउने कार्य नै गर्ने छु” भनी भाकल गर्नु पर्छ। म राती जागाराम बसी, भजन कीर्तन गर्छु, भनी प्रभु श्री हरि को भजन कीर्तन गर्नु पर्छ।
द्वादशीको दिन, दैनिक अनुष्ठानहरू पछि, भगवान नारायण को विशेष पूजा-आजा गर्नु पर्छ। यसरी कडाइका साथ एकादशीको अवलोकन गरिएको खण्डमा व्यक्तिले मरणोप्रान्त समेत अनन्त आनन्द प्राप्त गर्ने छ। एकादशीको महानता र विशेषता पापविहीन/ईश्वरीय र सद्गुण मात्र नभई हरेक एकादशीको पवित्र कथाहरू छन्। जुन कथा सुन्ने र सुनाउने गर्दा समेत ठुलो बलिदान र वाग्पेय यज्ञ गरे झैँ फल प्राप्त हुनेछ। एकादशीको ब्रत शुद्ध हृदयले अवलोकन गर्दा पूर्ण पूर्ति हुन्छ। यसले डरको निवारण गर्नु को साथ साथै मृत्यु पछि वैकुण्ठमा भगवान नारायणको शरण पाउन समेत मद्दत गर्दछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जुन 16, 2021 1 महिना
म कोठाभाडामा बस्छु एकादशि व्रत पनि लिन्छु तर सबै सामान जुटाउन सक्तिन अब के मैले गरेको व्रत निष्फल हुन्छ गुरु ।
जुन 17, 2021 1 महिना
जुन 18, 2021 1 महिना
garh sankat haruko jaankari paaye kasto hola
dharmik jaankaari paauda man atyant khusi hunxa garh gauchar haru ko pani jaankaari dida kasto hola
जुन 20, 2021 1 महिना
Ekadashi ko mahima bare janakari pauda atenta khushi lagyo
एकादशी व्रतको ’boutमा जानकारी
prem raj sharma
जुन 22, 2021 1 महिना
very nice i like this history. thanks. good morning Ji
जुलाई 9, 20213हप्ताहरु
santosh prasad yadv
जुलाई 13, 20212हप्ताहरु
hamilai garne ki nagarne
जुलाई 16, 20212हप्ताहरु
जुलाई 23, 20217दिनहरू
dharmik grahanta ko jankai
जुलाई 26, 20214दिनहरू
कर्कट राशी ले कुन बार व्रत बस्दा राम्रो हुन्छ
bada dashain Barshik Rashifal Bhai Tika bijaya dashami chaite dashain dashain ekadashi lunar eclipse makar sankranti Narayan Nepali Patro Rashifal Nepali Rashifal New Year Rashifal 2075 Putrada Ekadashi swasthani Tihar Varshik Rashifal Yama Panchak Yekadashi एकादशी खण्डग्रास गोवर्धन पर्वत घटस्थापना चन्द्रग्रहण तिहार त्रेता युग द्वापर युग नयाँ वर्ष नारायण निर्जला एकादशी बडादसैं भगवती भगवान् विष्णु भगवान् श्रीकृष्ण भाइटीका महाभारत यमपञ्चक यमराज युधिष्ठिर रामायण श्रीकृष्ण श्रीस्वस्थानी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सूर्यग्रहण सूर्यनारायण
श्रावण १५-खीर खाने दिन
जुलाई 27, 2021Nepali Patro (Sudan Bhattarai Upadhyaya)
P R.Bajracharya मा यल पञ्चदान
moti prasad paudel मा मंगल चौथी व्रत
चन्द सार्की मा मंगल चौथी व्रत
पुर्णदीप बस्याल मा मंगल चौथी व्रत
ronish मा मंगल चौथी व्रत